Shirkadda Hormuud oo kabaha la dul martay Shilinka Soomaaliga, dalkana ka dhigtay gobol Mareykanka ka mid ah - iftineducation.com ≡Navigasi Menu
→ Shirkadda Hormuud oo kabaha la dul martay Shilinka Soomaaliga, dalkana ka dhigtay gobol Mareykanka ka mid ah
Shirkadda Hormuud oo kabaha la dul martay Shilinka Soomaaliga, dalkana ka dhigtay gobol Mareykanka ka mid ah
iftineducation.com - Shirkadda Isgaarsiinta Hormuud oo ah shirkad si weyn u ballaarineysa awoodeeda guud ahaan dalka Soomaaliya oo dhan ayaa bilowday howlo ka baxsan isgaarsiinta isla markaana 40% iminka dhaqaalaheeda u weecisay ganacsiga qeybihiisa kala duwan, iyadoo saddexdii biloodba mar dekedda Muqdisho ku soo xirata maraakiib badeecado kala duwan u sidda.
Dhibaatooyinka shirkadda Isgaarsiinta Hormuud ku soo kordhisay ma aha kuwo halkaan lagu soo koobi karo, iyadoo aqoonyahanada iyo dadka la socda xaaladda dalka ay walaac ka muujiyeen doorka ay shirkaddu ku leedahay xasiloonida iyo ammaanka dalka, bacdamaa mas’uuliyiinteeda qaarkood lagu helay dembiyo argagixisanimo.
Xaaladda dalka Soomaaliya oo ka soo kabaneysa burburkii gaaray mudada 20-ka sano ka badan, waxaa haatan ka weynaanaya burburka dhaqaale ee shirkadda Isgaarsiinta Hormuud oo kabaha la dul martay isticmaalka shilinka Soomaaliga oo ay u rogtay in la isticmaalo Noodka DOLLARKA MAREYKANKA ah.
Lacagta Shilinka Soomaaliga ee haatan dalka laga isticmaalo oo markii horeba aadka u liidatay isla markaana sii dhimaneysay waxaa haatan arrintaasi aasay oo xabaalaha geliyay adeegga EVCPlus ee Taleefanka lacagta laga isticmaalo, kaasi oo ah mid Dollarka kaliya ku rajiistar gareysan isla markaana meesha ka saaray shilin Soomaaliga.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ma laha runtii awood ay uga hortagto tacadiga shirkadda Hormuud ay ku heyso shilinka Soomaaliga oo haddii aan degdeg tallaabo loo qaadin mar aan dheereyn dariishadda ka baxayo Noodka Kunka Shilin ee ka haray lacagihii uu dalku lahaa.
Hadaan dib u milicsano xilligii dalka ay ka jirtay dowladdii la riday sanadkii 1991-kii, Lacagaha Qalaad waxay lahaayeen Bankiyo gaar ah, shacabka Soomaaliyeed waxay isticmaalayeen shilinkooda, halka Bankiyada Lacagaha Qalaadna ay isticmaalayeen madaxda sare ee Dowladda, ganacsatada shisheeyaha iyo ajaanibtii dalka joogtay.
Isticmaalka adeegga EVCPLUS-ka shirkadda Isgaarsiinta Hormuud waxaa kale oo cabasho xoogan ay ka muujiyeen dadka eheladooda dibadda uga soo dira lacagaha Qalaad ee Dollarka ah, iyagoo xarumahooda aanay qaadan lacagaha jilicsan isla markaana maalin kasta ay soo ifbaxeyso dhibaatooyin dhinaca dhaqaalaha shacabka Soomaaliyeed ee doonaya inay shilinkooda isticmaalaan oo lacago fara badan looga goosanayo marka ay sarifanayaan.
Shirkadda Isgaarsiinta Hormuud ayaa kordhineysa xarumaheeda ugu weyn ee ay ka howlgasho, iyadoo dhowaan xaruntii saddexaad ee ugu weyn Muqdisho ka dhistay meel ku dhow garoonka diyaaradaha Muqdisho.
Marka la isku daro dhaqaalaha shirkadda Hormuud ka hesho isgaarsiinta iyo kan ganacsiga kale ayaa u saamaxaya inay sii casriyeyso qaabka ay u howlgasho, kuwaasi oo dalka iyo dadka aan wax dan ah ugu jirin balse iyagu ay ka macaashayaan shacabkaan markii horeba la daalaa dhacayay dhibaatooyinka ka heysta xaaladda adag ee ay ku sugan yihiin.
Khatarta kale ee shirkadda Isgaarsiinta Hormuud ayaa waxay ahay in maamulkeedu u hoggaansamo kooxaha ku hardamaya talada dalka sida Dowladda iyo Al-Shabaab, iyadoo labada dhinacba midba goonidiisa u siisa lacago canshuur ah isla markaana warbixin dhowaan laga soo saaray ay noqotay shirkadda ugu weyn ee bixisa dhaqaalaha ugu badan shirkadaha dalka ka howlgala.
Shirkadda Isgaarsiinta Hormuud ayaa maalmahaan bilowday inay xoojiso xayeysiin ay ku soo bandhigeyso adeegyo cusub oo ah ganacsi isla markaana baraha bulshada ku xayeysiineysa awoodeeda isgaarsiineed iyo borogaraamyo cusub oo dhammaantood danta ay ka leedahay uu yahay inay ku hesho dhaqaale ka badan kan hadda soo gala.
Shacabka Soomaaliyeed ee danyarta ah ayaa ku qaba dhibaatooyin aan la soo koobi karin, iyadoo ku khasabtay dadka dawarsada inay Taleefankooda isticmaalaan si loogu soo shubo lacagaha sadaqada ah, kuwa ganacsiga yar yar ka shaqeeya, gaadiidka dadweynaha ee BL-ka ah, shaqaalaha garab raratada ah iyo kuwa xoogooda maala ayaa ka mid ah.